जिब्रोको स्वाद्को लागि दाल,अचारमा हालेर धनीयाको पात खानुहुन्छ ? हो’सियार ज्या’न जान पनि सक्छ ! – Yuwa Aawaj
चैत्र १४, २०७७ शनिबार 3877
Prevमुटु स्वस्थ राख्न गर्नै पर्ने यी ५ कामहरु ।
Nextहाम्रै गाउँ घरमा पाइने तितेपातीका अचम्मैको फाइदाहरु ।
नेपालको खेल देखेर नेदरल्यान्ड्सका कप्तान चकित, भन्छन् : नेपालले हामीलाई गतिलो पाठ पढायो ।
मलेसियामा आवागमन नियन्त्रण आदेश (एमसिओ) सकियो, जनजीवन सामान्य हुदै !